दीपाश्रीको पहिरनमा दिपकको हस्तक्षेप ! « Ramailo छ
दीपाश्रीको पहिरनमा दिपकको हस्तक्षेप !
‘छक्का पञ्जा’ सिरिजकी निर्देशक दिपाश्री निरौला यो साता लगालग तीन कार्यक्रममा भेटिइन् । मंगलबारको कामना अवार्ड र बुधबारको ‘शत्रु गते’ को प्रेसमिट तथा ‘शेरबहादुर’ को प्रिमियर शोमा दिपाश्री भेटिइन् । यी तिनै कार्यक्रममा दिपाको पहिरन सामान्य देखियो, पहिरनमा कुनै तडकभडक देखिए । किन त ?
‘खै दिपकलाई यो लामो लामो लेहंगा मन पर्दैन रे’, गफगाफमा दिपाले खुस्काइन्, ‘फेरी आफुलाई अरु लाउन मन लाग्दैन् । त्यसैले जाडो पनि छ कोटमै हिंडिरहेको छु।’ निर्देशक भएपछि धेरै तडकभडकको आवश्यकता नभएको पनि दिपाले तर्क गरिन् । हिरोइन भएको भए अलि ड्रेसमा चासो हुन्थ्यो होला । अब निर्देशक भैसकें त्यसैले जे सजिलो लाग्छ त्यही लगाएर हिंड्छु ।’
के साँच्चै दिपाश्रीको ड्रेसअपमा दिपकले हस्तक्षेप गरेका हुन् या दिपाले ड्रेस डिजाइन समय नपाएकी हुन् ? ‘छक्का पञ्जा ३’ निर्देशनको तयारीमा जुटेकी दिपाश्री ‘शत्रु गते’ को प्रचार प्रसारमा व्यस्त छिन् । अगामी कार्यक्रममा दिपा कस्तो पहिरनमा प्रस्तुत होलिन् त ?